မသကျသကျ – Hlataw.com
ဖွဈပုံကဒီလိုဗြ။ ကြှနျတျောအမရေဲ့အကို ကနြေျာ့ဦးလေးပေါ့။ နာမညျက ဦးခိုငျသိနျး။ သူ့မိနျးမက ငယျငယျလေးဗြ။ ဦးလေးအသကျက ၄၅လောကျရှိပွီ။ ဦးလေးမိနျးမနာမညျက မသကျသကျတဲ့။ အသကျက ၃၀ ဝနျးကငျြလောကျပဲ ရှိသေးတယျဗြ။ ဇာကျလမျးအစကတော့ ကနြျောဦးလေးက ကုနျရောငျးကုနျဝယျ လုပျတယျ။ သားသမီးသာ မရှိသေးတာ စီးပှားရေးသောငျးကနျြးတယျ။ ဦးလေးက ကနြျောကလညျး ဦးလေးမိနျးမကို တခါတခါ ဦးလေးမိနျးမကို ခိုးခိုးပွီး နို့တှဖေငျတှကေို ကွညျ့တတျတာကို ယောကျြားသာရှိတာ ဖငျတှေ ရငျတှကေ အျောဒီဂငျြနယျပဲလေ။ ကနြျောက ကြောငျးပိတျရကျကလညျး ဖွဈနတေော့ အိမျမှာပဲ နဖွေဈတဲ့ အခြိနျဆိုတော့ ညနေ ၅နာရီလောကျ ကတြော့ဦးလေးရောကျလာတယျ။ ဦးလေးက ကုနျဝယျသှာဖို့ ကနြေျာ့ကို သူ့အိမျဖကျကွညျ့ပေးထားဖို့ မှာခဲ့တယျလေ။ ဒီကလညျး အဆငျသငျ့ပေါ့ဗြာ။ “ဟုတြ့ကဲ့” ဆိုပွီးပွောလိုကျတယျ။ ညနထေမငျးစားပွီး ဦးလေးတို့အိမျဖကျ လြှောကျလာလိုကျတယျ။ အိမျက သိပျမဝေးပါဘူး။ အိမျနောကျဖေး ၂ အိမျကြျောဆို ရောကျပွီလေ။ ရနာရီခှဲဆိုတော့ မိုးလညျး ခြုပျနတေဲ့အခြိနျပေါ့။ ကနြျောရောကျတော့ ဦးလေးမိနျးမ သကျသကျက ရခြေိုးနတေယျ။
ကနြျောလညျး ဧညျ့ခနျးထဲ ဝငျထိုငျလိုကျတာ ရခြေိုးခနျးနဲ့က မကျြစောငျးထိုးလေး ဆိုတော့ ကွညျ့ကောငျးကောငျးနဲ့ ကွညျ့နလေိုကျတာ။ ရခြေိုးခနျး မီးဖိုခနျးက မီးရောငျလှမျးဟပျထားတော့ အခနျးကလညျး မပိတျတော့ ထမီမပါကို လုံးကြှတျခြိုးနလေိုကျတာ။ အောကျက ညီလေးကလညျး တောငျနလေိုကျတာမှ ပေါကျသငျညိုလို ခေါငျးတညိမျ့ညိမျ့ဖွဈနတောလေ။ ခဏကွတော့ အနျတီသကျက ကနြျောရောကျတာ သိလြှကျနဲ့ မသိခငျြယောငျဆောငျ ထားလလေားပေါ့။ ပွီးတော့ သူရတှေသေုတျပွီး ထှကျလာခဲ့တယျ။ “အောငျအောငျ” လို့ ကနြေျာ့ကို ချေါလိုကျတယျ။ “မငျးဦးလေးက ဒီညပွနျမလာဘူးတဲ့.. ဖုနျးဆကျတယျ.. ရောငျးသူနဲ့ မတှသေ့ေးလို့ မနကျမှ ပွနျလာမှာတဲ့ အောငျအောငျ ညစောငျ့အိပျပေးပါလား” ဆိုပွီးပွောလာတော့ “ဟုတျ…ဟုတျကဲ့ အနျတီသကျ” လို့ပွောလိုကျတယျ။ အနျတီသကျက ထမငျးစားဖို့ ပွငျနတေော့ ကနြျောလညျး အနျတီသကျကို ဝိုငျးကူလိုကျတယျ။ ခဏနတေော့ ထမငျးစားနရေငျးနဲ့ အနျတီသကျက စကားစလာတယျ။ “အောငျအောငျ မငျးရညျးစားတှေ ရနပွေီလား” တဲ့။
ကနြျောလညျး ”မရှိပါဘူးပေါ့…” ၁ဝတနျးရောကျပမေဲ့ ရညျးစားက မရှိဘူးလေ။ အနျတီသကျက… “ငါ့တူကလညျး ညံ့လိုကျတာရှာပေါ့ကှယျ” ဆိုတော့ “ဖွညျးဖွညျးပေါ့” ပွနျဖွလေိုကျတယျ။ ရယျရယျမောမောပဲ။ “အနျတီရော သားသမီး မယူသေးဘူးလား” ဆိုတော့.. “ယူတယျ မရတာ” တဲ့။ ”အိမျထောငျသကျ ၅နှဈမှာတောငျ ကလေးမရဘူး” တဲ့။ ဘယျသူ့ကွောငျ့မရတာလညျးတော့ မသိပါဘူး။ ထမငျးစားပွီးတော့ အနျတီသကျက တီဗှီကွညျ့မယျ ပွောတော့ ကနြျောလညျး ကွညျ့မယျပေါ့။ မွနျမာဇာကျကားထိုးလိုကျတော့ အနျတီသကျက မကွိုကျဖူးတဲ့။ အဲ့တာနဲ့ နိုငျငံခွားကား ထိုးလိုကျတယျ။ အနျတီသကျကလညျး အိပျရငျးနဲ့ ကွညျ့ခငျြတယျဆိုပွီး ကနြေျာ့ပေါငျပျေါ ခေါငျးတငျလာတယျလေ။ နိုငျငံခွားကားဆိုတော့ သိတဲ့အတိုငျး လိုးတာတှလေညျး တခနျး ၂ခနျး ပါတယျလေ။ အဲ့ဒီအခနျးရောကျရငျ ကနြျောလီးကလညျး ထိမျးမရဘူး။ အတှငျးခံကလညျး ဝတျမလာမိတော့ အနျတီသကျခေါငျးကို ထောကျမိတာပေါ့။ အနျတီသကျကလညျး မသိခငျြယောငျဆောငျတာလား မသိတာလား မသိပါဘူး။ ကနြျောလညျး အိပျခငျြတယျပွောပွီး ထလိုကျတော့တယျ။
ကွာကွာနရေငျ မနနေိုငျတာ ကို့စိတျကိုသိတယျလေ။ အနျတီသကျက… “အောငျအောငျ မငျးသရဲကွောကျတတျတယျ မဟုတျလား.. အနျတီသကျနဲ့ လာအိပျ” လို့ပွောတော့ ရငျတှတေောငျ ခုနျတယျဗြာ။ ဦးလေးတို့လငျမယားအိပျခနျးကွီးက ရှယျပဲ။ မှရေ့ာကလညျး အထူကွီး။ ဟူးးး.. ဦးလေးမိနျးမဆိုတဲ့ အသိက ခေါငျးထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။ အနျတီသကျက အစကတော့ ကြောပေးပွီး အိပျနလေရေဲ့။ ကနြျောလညျး အတှကွေုံ့ကလညျး မရှိ။ အနျတီသကျ ခွထေောကျတှကေ စလာပွီလေ။ ကနြေျာ့ခွထေောကျတှကေို လာလာပှတျနတော ကနြျောလညျး အထာတော့ ပေါကျပွီလေ။ အနျတီသကျက ဒီဘကျလညျးလှညျ့ရော့ မပွောမဆိုနဲ့ ဆှဲဖကျလိုကျတယျ။ အနျတီသကျလညျး အလိုကျတသိပဲ ရငျဘကျထဲမှာ ငွိမျနလေိုကျတာမှ…. “အောငျအောငျ အနျတီသကျကို ခဈြလားဟငျ” နဲ့ မေးတော့တာပဲ။ ကနြျောလညျး.. အရမျးခဈြတာပေါ့… ခဈြလို့ အနျတီသကျကို ဖကျထားတာပေါ့” လို့ ပွောလိုကျတယျ။ အနျတီသကျလညျး… “အောငျအောငျ အနျတီသကျကို ဖငျတှေ ခိုးခိုးကွညျ့တာ သိတယျ” တဲ့။ ကနြျောလညျး မရှကျနိငျတော့ဘူး။
အနျတီသကျရဲ့ နူတျခမျးတှကေို ဆှဲစုပျလိုကျတော့ ပွနျနမျးတယျ။ သူလညျး…. “ခှငျ့ပွုပေးလား” လို့ ပွောတော့… “အောငျအောငျ့သဘော” ဆိုပွီး အင်ျကြီတှေ ခြှတျပေးတယျ။ လီကလညျး တတိနျးတိနျးနဲ့ တောငျလိုကျတာမှ.. “လိုးမယျနျော” လို့ပွောပွီး… “အငျ” တဲ့ ဆိုပွီး အနျတီသကျပျေါ မှောကျအိပျလိုကျတယျ။ အနျတီသကျကလညျး ပေါငျကားပေးထားတော့ ထညျ့လိုကျတာ အရညျတှကေ ထှကျနတောဆိုတော့ ခြောခြောရှုရှုပဲ ဝငျသှားတာ ကလေးမမှေးထားတော့ သိပျမခြောငျဘူး။ စီးစီးလေးဗြ။ ကနြျောလညျး နို့တှစေို့ နူတျခမျးတှစေုပျနဲ့ ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး လိုးတာ အနျတီသကျက.. “အား…အား..” ဆိုပွီး အျောပေးရှာတယျ။ “ကနြျောလိုးတာကောငျးလား” လို့ပွောတော့ “အငျ..” တဲ့။ ဦးလေးထကျ ပိုကောငျးတယျတဲ့။ ကနြျောလညျး လိုးရငျးလိုးရငျးနဲ့ ၁၅ခကျြခကျြလောကျ ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး လိုးလိုကျတာ အခြိနျကတှကေ တရှရှေှ့ကေု့နျလာသလို အောငျအောငျလညျး ဒူးတှကေုနျလာပွီ။ အနျတီသကျကတော့ မဖွုံရေးခြ မဖွုံဆိုသလို့ပေါ့။ အနျတီသကျက… “အောငျအောငျမောနပွေီလား” ဆိုပွီး အောငျအောငျကို ပကျလကျလှနျခိုငျးပွီး အပျေါကနေ ဖားခုနျသလို ခုနျဆှခုနျဆှနှငျ့ ကာမပနျးတိုငျးကို ရောကျအောငျ ကွိုးစားနလေိုကျတာ။
အောငျအောငျလညျး ဒီတခါတော့ သကျသကျသာသာနှငျ့ မခံစားဖူးသေးတဲ့ လိုးခွငျးအရသာကို နညျးမြိုးစုံ ခံစားနရေသဖွငျ့ နတျစညျးစိမျယဈနသေညျအလား … “အနျတီပွီးတော့မယျ” ဆိုပွီး ပွောပွီး အခြိနျမွငျ့လိုကျလသေညျ။ ဒီတကွိမျတော့ အောငျအောငျလညျး မခံနိုငျလောကျအောငျ နာလာသညျ။ ၂ခြီမွောကျ ဆိုတော့လညျး ဖကျဖကျလညျး မောလှပွီ။ တယောကျကိုတယောကျဖကျကာ ကာမပနျးတိုငျကို ပွိုငျတူရောကျလိုကျကွလသေညျ။ မနကျခငျးစောစော အနျတီသကျ ထမငျးထခကျြလရော။ အောငျအောငျမှာ မနိုးသေး။ အနျတီသကျက ထတော့ဆိုပွီး လာနှိုးလရော ပွာပွာသလဲ နာရီကွညျ့တော့ ၆နာရီ။ အနျတီသကျက အောငျအောငျပါးကို မပွောမဆို နမျးလိုကျရာ အောငျအောငျလီးကလညျး ဒနျ့ဆို ထလာပွနျပွီလေ။ “အောငျအောငျ ညီလေးက အရမျးဆိုးတယျကှာ… ညက ဆိုးထားတာတောငျ အခုထိ ဆိုးတုနျး” ဆိုပွီး အနျတီသကျပွောပွောဆိုဆို လှမျးကိုငျလိုကျတာ… “မရတော့ဘူး” ဆိုပွီး အနျတီသကျကို ဆှဲလှဲလိုကျပွီး အနမျးမိုးတှေ မပွကျရှာလိုကျလတေော့တယျ။
“ဦးလေးက ဘယျအခြိနျလာမလဲမသိ” ဆိုပွီး အနျတီသကျကို ထမီလှနျကာ မွနျမွနျလိုးလတေော့တယျ။ အနျတီသကျကလညျး ကော့ကော့ပွီး ဆောငျ့ပေးရှာတယျ။ပါးစပျကလညျး အနျတီကို ခဈြတယျ ခဈြတယျ တဖှဖှ အျောနလေရေဲ့။ အားက ပွညျ့နလေို့လားမသိ ကွာကွာမလိုးလိုကျရ ၅ မိနဈလောကျပဲ ကွာလိုကျတယျ။ သုတျရညျတှေ ပနျးထညျ့လိုကျလတေော့တယျ။ လီးက အရညျတှကေို ထမီနှငျ့သုကျကာ.. “ပွနျတော့မယျ” ဆိုပွီး သုတျခွတေငျပွနျတာ နောကျပငျ မကွညျ့။ အနျတီသကျကတော့ အောငျအောငျကြောကို ငေးကွညျ့ရငျး ရငျထဲမှာကနြေပျပွီး ပြျောနရှောတယျ။ မကွာလိုကျပါ အနျတီသကျယောကျြား ပွနျရောကျလာလတေော့တယျ။ ပုံမပကျြအောငျ အနအေထိုငျ ဆငျခွငျလြှကျပေါ့။ “အောငျအောငျ လာစောငျ့ပေးလား” ပွောတော့ “မလာဘူး ညက ခဏပဲလာတယျ” ဟု ရှီးလတေော့သညျ။
သညျလိုနဲ့ ၃လလောကျကွာခဲ့ပွီ။ အနျတီသကျမှာ ကိုဝနျရှိနသေညျဟု အနျတီသကျယောကျြား ရပျကှကျထဲ လှညျ့ပတျကွှားနတော မွငျတှနေ့ရေတာ ကို့စိတျကို မလုံဘူး။ ကိုဝနျဘယျနှလလညျး မေးတော့ ၃လနဲ့ ဟိုကျရှားပါး… စိတျထဲမှာ ဘုရားတမိလိုကျသညျ။ ဘာလိုလိုနဲ့ အနျတီသကျကလေး ၁နှဈတောငျ ပွညျ့ခဲပါပွီ။ ကလေးမှေးနပှေဲ့မှာ ကလေးငိုသံ မွူးသံတှနှေငျ့ ဆူညံ့နလေသေညျ။ ဦးလေးကလညျး ကလေးကို နမျးလိုကျ ရှုံ့လိုကျနှငျ့ အနျတီသကျကတော့ သဘောကစြှာ ပွုံးနလေတေော့သညျ။ အဲ့သညျ့အပွုံးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို ကနြျောကလှဲပွီး ဘယျသူသိမညျနညျး။ စိတျထဲကလညျး ခှငျလှတျပါ ဦးလေးရယျ ဆိုပွီး အကွိမျကွိမျတောငျးပနျနမေိတော့တယျ….. ပွီးပါပွီ။
ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျ။ ကျွန်တော်အမေရဲ့အကို ကျနော့်ဦးလေးပေါ့။ နာမည်က ဦးခိုင်သိန်း။ သူ့မိန်းမက ငယ်ငယ်လေးဗျ။ ဦးလေးအသက်က ၄၅လောက်ရှိပြီ။ ဦးလေးမိန်းမနာမည်က မသက်သက်တဲ့။ အသက်က ၃၀ ၀န်းကျင်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။ ဇာက်လမ်းအစကတော့ ကျနော်ဦးလေးက ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် လုပ်တယ်။ သားသမီးသာ မရှိသေးတာ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းတယ်။ ဦးလေးက ကျနော်ကလည်း ဦးလေးမိန်းမကို တခါတခါ ဦးလေးမိန်းမကို ခိုးခိုးပြီး နို့တွေဖင်တွေကို ကြည့်တတ်တာကို ယောကျာ်းသာရှိတာ ဖင်တွေ ရင်တွေက အော်ဒီဂျင်နယ်ပဲလေ။ ကျနော်က ကျောင်းပိတ်ရက်ကလည်း ဖြစ်နေတော့ အိမ်မှာပဲ နေဖြစ်တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ညနေ ၅နာရီလောက် ကျတော့ဦးလေးရောက်လာတယ်။ ဦးလေးက ကုန်ဝယ်သွာဖို့ ကျနော့်ကို သူ့အိမ်ဖက်ကြည့်ပေးထားဖို့ မှာခဲ့တယ်လေ။ ဒီကလည်း အဆင်သင့်ပေါ့ဗျာ။ “ဟုတျ့ကဲ့” ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။ ညနေထမင်းစားပြီး ဦးလေးတို့အိမ်ဖက် လျှောက်လာလိုက်တယ်။ အိမ်က သိပ်မဝေးပါဘူး။ အိမ်နောက်ဖေး ၂ အိမ်ကျော်ဆို ရောက်ပြီလေ။ ၇နာရီခွဲဆိုတော့ မိုးလည်း ချုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။ ကျနော်ရောက်တော့ ဦးလေးမိန်းမ သက်သက်က ရေချိုးနေတယ်။
ကျနော်လည်း ဧည့်ခန်းထဲ ၀င်ထိုင်လိုက်တာ ရေချိုးခန်းနဲ့က မျက်စောင်းထိုးလေး ဆိုတော့ ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်နေလိုက်တာ။ ရေချိုးခန်း မီးဖိုခန်းက မီးရောင်လှမ်းဟပ်ထားတော့ အခန်းကလည်း မပိတ်တော့ ထမီမပါကို လုံးကျွတ်ချိုးနေလိုက်တာ။ အောက်က ညီလေးကလည်း တောင်နေလိုက်တာမှ ပေါက်သင်ညိုလို ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်ဖြစ်နေတာလေ။ ခဏကြတော့ အန်တီသက်က ကျနော်ရောက်တာ သိလျှက်နဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင် ထားလေလားပေါ့။ ပြီးတော့ သူရေတွေသုတ်ပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ “အောင်အောင်” လို့ ကျနော့်ကို ခေါ်လိုက်တယ်။ “မင်းဦးလေးက ဒီညပြန်မလာဘူးတဲ့.. ဖုန်းဆက်တယ်.. ရောင်းသူနဲ့ မတွေ့သေးလို့ မနက်မှ ပြန်လာမှာတဲ့ အောင်အောင် ညစောင့်အိပ်ပေးပါလား” ဆိုပြီးပြောလာတော့ “ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့ အန်တီသက်” လို့ပြောလိုက်တယ်။ အန်တီသက်က ထမင်းစားဖို့ ပြင်နေတော့ ကျနော်လည်း အန်တီသက်ကို ဝိုင်းကူလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ ထမင်းစားနေရင်းနဲ့ အန်တီသက်က စကားစလာတယ်။ “အောင်အောင် မင်းရည်းစားတွေ ရနေပြီလား” တဲ့။
ကျနော်လည်း ”မရှိပါဘူးပေါ့…” ၁၀တန်းရောက်ပေမဲ့ ရည်းစားက မရှိဘူးလေ။ အန်တီသက်က… “ငါ့တူကလည်း ညံ့လိုက်တာရှာပေါ့ကွယ်” ဆိုတော့ “ဖြည်းဖြည်းပေါ့” ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ရယ်ရယ်မောမောပဲ။ “အန်တီရော သားသမီး မယူသေးဘူးလား” ဆိုတော့.. “ယူတယ် မရတာ” တဲ့။ ”အိမ်ထောင်သက် ၅နှစ်မှာတောင် ကလေးမရဘူး” တဲ့။ ဘယ်သူ့ကြောင့်မရတာလည်းတော့ မသိပါဘူး။ ထမင်းစားပြီးတော့ အန်တီသက်က တီဗွီကြည့်မယ် ပြောတော့ ကျနော်လည်း ကြည့်မယ်ပေါ့။ မြန်မာဇာက်ကားထိုးလိုက်တော့ အန်တီသက်က မကြိုက်ဖူးတဲ့။ အဲ့တာနဲ့ နိုင်ငံခြားကား ထိုးလိုက်တယ်။ အန်တီသက်ကလည်း အိပ်ရင်းနဲ့ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီး ကျနော့်ပေါင်ပေါ် ခေါင်းတင်လာတယ်လေ။ နိုင်ငံခြားကားဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း လိုးတာတွေလည်း တခန်း ၂ခန်း ပါတယ်လေ။ အဲ့ဒီအခန်းရောက်ရင် ကျနော်လီးကလည်း ထိမ်းမရဘူး။ အတွင်းခံကလည်း ၀တ်မလာမိတော့ အန်တီသက်ခေါင်းကို ထောက်မိတာပေါ့။ အန်တီသက်ကလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလား မသိတာလား မသိပါဘူး။ ကျနော်လည်း အိပ်ချင်တယ်ပြောပြီး ထလိုက်တော့တယ်။
ကြာကြာနေရင် မနေနိုင်တာ ကို့စိတ်ကိုသိတယ်လေ။ အန်တီသက်က… “အောင်အောင် မင်းသရဲကြောက်တတ်တယ် မဟုတ်လား.. အန်တီသက်နဲ့ လာအိပ်” လို့ပြောတော့ ရင်တွေတောင် ခုန်တယ်ဗျာ။ ဦးလေးတို့လင်မယားအိပ်ခန်းကြီးက ရှယ်ပဲ။ မွေ့ရာကလည်း အထူကြီး။ ဟူးးး.. ဦးလေးမိန်းမဆိုတဲ့ အသိက ခေါင်းထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။ အန်တီသက်က အစကတော့ ကျောပေးပြီး အိပ်နေလေရဲ့။ ကျနော်လည်း အတွေ့ကြုံကလည်း မရှိ။ အန်တီသက် ခြေထောက်တွေက စလာပြီလေ။ ကျနော့်ခြေထောက်တွေကို လာလာပွတ်နေတာ ကျနော်လည်း အထာတော့ ပေါက်ပြီလေ။ အန်တီသက်က ဒီဘက်လည်းလှည့်ရော့ မပြောမဆိုနဲ့ ဆွဲဖက်လိုက်တယ်။ အန်တီသက်လည်း အလိုက်တသိပဲ ရင်ဘက်ထဲမှာ ငြိမ်နေလိုက်တာမှ…. “အောင်အောင် အန်တီသက်ကို ချစ်လားဟင်” နဲ့ မေးတော့တာပဲ။ ကျနော်လည်း.. အရမ်းချစ်တာပေါ့… ချစ်လို့ အန်တီသက်ကို ဖက်ထားတာပေါ့” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အန်တီသက်လည်း… “အောင်အောင် အန်တီသက်ကို ဖင်တွေ ခိုးခိုးကြည့်တာ သိတယ်” တဲ့။ ကျနော်လည်း မရှက်နိင်တော့ဘူး။
အန်တီသက်ရဲ့ နူတ်ခမ်းတွေကို ဆွဲစုပ်လိုက်တော့ ပြန်နမ်းတယ်။ သူလည်း…. “ခွင့်ပြုပေးလား” လို့ ပြောတော့… “အောင်အောင့်သဘော” ဆိုပြီး အင်္ကျီတွေ ချွတ်ပေးတယ်။ လီကလည်း တတိန်းတိန်းနဲ့ တောင်လိုက်တာမှ.. “လိုးမယ်နော်” လို့ပြောပြီး… “အင်” တဲ့ ဆိုပြီး အန်တီသက်ပေါ် မှောက်အိပ်လိုက်တယ်။ အန်တီသက်ကလည်း ပေါင်ကားပေးထားတော့ ထည့်လိုက်တာ အရည်တွေက ထွက်နေတာဆိုတော့ ချောချောရှုရှုပဲ ၀င်သွားတာ ကလေးမမွေးထားတော့ သိပ်မချောင်ဘူး။ စီးစီးလေးဗျ။ ကျနော်လည်း နို့တွေစို့ နူတ်ခမ်းတွေစုပ်နဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးတာ အန်တီသက်က.. “အား…အား..” ဆိုပြီး အော်ပေးရှာတယ်။ “ကျနော်လိုးတာကောင်းလား” လို့ပြောတော့ “အင်..” တဲ့။ ဦးလေးထက် ပိုကောင်းတယ်တဲ့။ ကျနော်လည်း လိုးရင်းလိုးရင်းနဲ့ ၁၅ချက်ချက်လောက် ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးလိုက်တာ အချိန်ကတွေက တရွှေ့ရွှေ့ကုန်လာသလို အောင်အောင်လည်း ဒူးတွေကုန်လာပြီ။ အန်တီသက်ကတော့ မဖြုံရေးချ မဖြုံဆိုသလို့ပေါ့။ အန်တီသက်က… “အောင်အောင်မောနေပြီလား” ဆိုပြီး အောင်အောင်ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး အပေါ်ကနေ ဖားခုန်သလို ခုန်ဆွခုန်ဆွနှင့် ကာမပန်းတိုင်းကို ရောက်အောင် ကြိုးစားနေလိုက်တာ။
အောင်အောင်လည်း ဒီတခါတော့ သက်သက်သာသာနှင့် မခံစားဖူးသေးတဲ့ လိုးခြင်းအရသာကို နည်းမျိုးစုံ ခံစားနေရသဖြင့် နတ်စည်းစိမ်ယစ်နေသည်အလား … “အန်တီပြီးတော့မယ်” ဆိုပြီး ပြောပြီး အချိန်မြင့်လိုက်လေသည်။ ဒီတကြိမ်တော့ အောင်အောင်လည်း မခံနိုင်လောက်အောင် နာလာသည်။ ၂ချီမြောက် ဆိုတော့လည်း ဖက်ဖက်လည်း မောလှပြီ။ တယောက်ကိုတယောက်ဖက်ကာ ကာမပန်းတိုင်ကို ပြိုင်တူရောက်လိုက်ကြလေသည်။ မနက်ခင်းစောစော အန်တီသက် ထမင်းထချက်လေရာ။ အောင်အောင်မှာ မနိုးသေး။ အန်တီသက်က ထတော့ဆိုပြီး လာနှိုးလေရာ ပြာပြာသလဲ နာရီကြည့်တော့ ၆နာရီ။ အန်တီသက်က အောင်အောင်ပါးကို မပြောမဆို နမ်းလိုက်ရာ အောင်အောင်လီးကလည်း ဒန့်ဆို ထလာပြန်ပြီလေ။ “အောင်အောင် ညီလေးက အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ… ညက ဆိုးထားတာတောင် အခုထိ ဆိုးတုန်း” ဆိုပြီး အန်တီသက်ပြောပြောဆိုဆို လှမ်းကိုင်လိုက်တာ… “မရတော့ဘူး” ဆိုပြီး အန်တီသက်ကို ဆွဲလှဲလိုက်ပြီး အနမ်းမိုးတွေ မပြက်ရွာလိုက်လေတော့တယ်။
“ဦးလေးက ဘယ်အချိန်လာမလဲမသိ” ဆိုပြီး အန်တီသက်ကို ထမီလှန်ကာ မြန်မြန်လိုးလေတော့တယ်။ အန်တီသက်ကလည်း ကော့ကော့ပြီး ဆောင့်ပေးရှာတယ်။ပါးစပ်ကလည်း အန်တီကို ချစ်တယ် ချစ်တယ် တဖွဖွ အော်နေလေရဲ့။ အားက ပြည့်နေလို့လားမသိ ကြာကြာမလိုးလိုက်ရ ၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာလိုက်တယ်။ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်လေတော့တယ်။ လီးက အရည်တွေကို ထမီနှင့်သုက်ကာ.. “ပြန်တော့မယ်” ဆိုပြီး သုတ်ခြေတင်ပြန်တာ နောက်ပင် မကြည့်။ အန်တီသက်ကတော့ အောင်အောင်ကျောကို ငေးကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာကျေနပ်ပြီး ပျော်နေရှာတယ်။ မကြာလိုက်ပါ အန်တီသက်ယောကျာ်း ပြန်ရောက်လာလေတော့တယ်။ ပုံမပျက်အောင် အနေအထိုင် ဆင်ခြင်လျှက်ပေါ့။ “အောင်အောင် လာစောင့်ပေးလား” ပြောတော့ “မလာဘူး ညက ခဏပဲလာတယ်” ဟု ရွီးလေတော့သည်။
သည်လိုနဲ့ ၃လလောက်ကြာခဲ့ပြီ။ အန်တီသက်မှာ ကိုဝန်ရှိနေသည်ဟု အန်တီသက်ယောကျာ်း ရပ်ကွက်ထဲ လှည့်ပတ်ကြွားနေတာ မြင်တွေ့နေရတာ ကို့စိတ်ကို မလုံဘူး။ ကိုဝန်ဘယ်နှလလည်း မေးတော့ ၃လနဲ့ ဟိုက်ရှားပါး… စိတ်ထဲမှာ ဘုရားတမိလိုက်သည်။ ဘာလိုလိုနဲ့ အန်တီသက်ကလေး ၁နှစ်တောင် ပြည့်ခဲပါပြီ။ ကလေးမွေးနေ့ပွဲမှာ ကလေးငိုသံ မြူးသံတွေနှင့် ဆူညံ့နေလေသည်။ ဦးလေးကလည်း ကလေးကို နမ်းလိုက် ရှုံ့လိုက်နှင့် အန်တီသက်ကတော့ သဘောကျစွာ ပြုံးနေလေတော့သည်။ အဲ့သည့်အပြုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျနော်ကလွဲပြီး ဘယ်သူသိမည်နည်း။ စိတ်ထဲကလည်း ခွင်လွှတ်ပါ ဦးလေးရယ် ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်နေမိတော့တယ်….. ပြီးပါပြီ။